Ny lalao Sonic 5 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny lalao Sonic 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Aaron Rivas | 09/08/2021 05:27 | Nohavaozina amin'ny 09/08/2021 06:20 | Fitaovana Android, Lalao Android
Sonic dia iray amin'ireo endri-tsoratra malaza indrindra eo amin'ny tontolon'ny lalao video, miaraka amin'ireo kilasika nanomboka tamin'ny taona 90 tamin'ny sehatra maro toa ny Nintendo, Play Station, Xbox ary solosaina. Sariitatra malaza be eran'izao tontolo izao ihany koa izy io, ary na ho an'izay na ho an'ny zavatra voalohany dia manana ivon-toeran'ny mpankafy izy io. Izany no antony anoloranay anao izao lahatsoratra fanangonana izao, izay anananay lisitra anao ny lalao Sonic tsara indrindra ho an'ny AndroidSatria misy maromaro ao amin'ny Play Store hiaraka sy hanampy ny hedgehog haingana dia haingana handresy ireo olon-dratsy.
Maimaimpoana izy rehetra, misy ao amin'ny Google Play Store ary, mazava ho azy, dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny sokajy misy azy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia anisan'ny misintona indrindra izy ireo ary manana ny filalaovana tsara indrindra.
Etsy ambany no hahitanao andiana lalao Sonic tsara indrindra ho an'ny finday Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
Na izany aza, iray na maromaro dia mety manana rafitra mikrôpôment anatiny, izay mamela ny fidirana amin'ny atiny bebe kokoa ao anatiny, ary koa ny fahazoana lalao lalao bebe kokoa amin'ny ambaratonga, zavatra marobe, loka ary valisoa, ankoatry ny zavatra hafa. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao isika hanatona azy.
2 Sonic ny Hedgehog Classic
3 Sonic CD Classic
4 Sonic The Hedgehog 2 Classical
5 Tafika Sonic: Ady haingana
Hanombohana amin'ny tongotra ankavanana, manana Sonic Dash isika, iray amin'ireo lalao malaza indrindra amin'ny Play Store ary tsy amin'ireo lalao Sonic ihany. Ity lohateny ity dia mirehareha amin'ny 100+ tapitrisa fampidinana an-tsokosoko ao amin'ny magazay ary manana laza 4.6-kintana somary hajaina, izay mifototra amin'ny fanamarihana sy naoty 5 tapitrisa.
Sonic Dash no lalao mahazatra anaovana manana tontolo sy haavo am-polony ianao, samy sarotra noho ny iray hafa ary misy singa sy sakana samihafa. Ity iray ity dia manana lohahevitra mitovy amin'ny Temple Run sy Subway Surfers, lalao roa hafa miaraka amin'ny dinamika mitovy.
Betsaka ny scenario, amin'ny 3D rehetra ary miaraka amina sary mihetsika miasa tsara. Ny paikady dia ny mihazakazaka miaraka amin'i Sonic ary manao azy hitsambikina, hialana ary hikorisa hisorohana izay mety ho tafintohina satria, raha manao izany izy dia ho resy. Ny vaovao tsara dia afaka manomboka amin'ny toerana nijanonanao ianao fa tsy matetika. Ho an'ity dia tsy maintsy manana fiainana sy fotoana hafa ianao. Tadiavo ary angony ny vola madinika sy ny fahaiza-manao rehetra izay eny an-dalana ary reseo ny ambaratonga rehetra ho mpihazakazaka haingana indrindra rehetra.
Ampiasao ny hery sy ny combo samihafa mba ho mpandresy amin'ny tontolo tsirairay; ampiasao ny fanafihana drôna ary tsy ho simba sy tsy ho resy. Manana endri-tsoratra isan-karazany koa ianao toa ny Tails, Shadow, ary Knuckles, izay namana akaiky indrindra an'i Sonic. Ary koa, ahoana no hitrangany raha tsy izany, misy boss amin'ny faran'ny tontolo, mazava ho azy, fa sarotra ny mandresy, noho izany dia mila miomana hiatrika azy ireo ianao.
Ao anatin'ny lalao dia afaka mividy sy mahazo ihany koa ianao hery mahery vaika izany dia natao hahatonga anao ho lavitra noho ny tsy anananao azy ireo. Azonao atao koa ny manomboka lohany, ampinga, andriamby ary scorer.
Etsy ankilany, ny fahasosorana tsy miseho amin'ny Sonic Dash ho an'ny Android; ianao dia ho afaka ny hampifaly ny tenanao amin'ny iraka sy handresy azy ireo hampiakarana ny isa mitombo isa sy / na hahazoana loka mahatalanjona.
Sonic ny Hedgehog Classic
Sonic the Hedgehog Classic dia lalao sehatra mahaliana tokoa izay mitondra antsika hiverina amin'ny taona 90 sy tany am-piandohan'ny taona 2000 noho ireo sary sy sary mihetsika Retro tamin'io vanim-potoana io. Ity lohateny SEGA ity dia mpanafika ratsy an'i Dr. Eggman, izay ratsy fanahy sy maditra, izay tsy maintsy resinao amin'ny Sonic, fa tsy alohan'ny handresena ireo tontolo sy sehatra rehetra misy.
Dr. Eggman te-hahita ireo Chaeral Emeralds fito hamita farany ny fitaovam-piadiany farany, dia ny atody fahafatesana. Amin'izany dia te-handresy an'izao tontolo izao izy, zavatra izay ho vitany mora foana raha vantany vao vita izany. Ny tanjona dia ny hisorohana izany tsy hitrangan'izany, fa noho izany dia tsy maintsy mandresy ny sakana rehetra ianao, mahazoa ny vola madinika rehetra sy ny valisoa amin'ny lalao ary hahatratra ny faran'ny tontolo hifanatrika aminy ary handresy azy amin'ny duel hatramin'ny fahafatesany , izay tsy tsotra.
Ity lalao ity, na dia manana fomba Retro aza tahan'ny famelomana 60 Hz. Ankoatr'izay, manana fomba maro izy, anisan'izany ny contrarrelok. Ianao koa dia manana naman'i Sonic marobe ao, ary Sonic, Tails ary Knuckles izy ireo; miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mampiasa fahaiza-manao sy hery samihafa toy ny manidina, mananika ary mitsofoka amin'ny ambaratonga.
Iray amin'ireo tombony sy mampiavaka an'ity lalao ity ny milalao azy amin'ny mpanara-maso ivelany amin'ny alàlan'ny Bluetooth. Izy io dia mifanaraka amin'ny mpanara-maso HID, toy ny MOGA avy amin'ny Power A, Nyko ary Xbox.
Lohateny SEGA hafa tsara nanampy ny repertoire-ny lalao Sonic ao amin'ny Play Store ho an'ny finday Android dia Sonic CD Classic. Ity iray ity koa napetraka amin'ny fomba Retro, noho izany ny sary dia somary pixelated mba mahatoky amin'ny fiandohan'ny lalao Sonic.
Amin'ity lalao ity dia mila mahita ianao ary mahazo ireo Time Stones fito handresy an'i Dr. Eggman ary hamonjy an'i Amy Rose. Ampiasao ny tadion'i Sonic sy ny tadiny super hanadiovana ny haavony haingana araka izay tratra ary handehandeha mandritra ny fotoana mba hankafizanao ny kinova taloha, ankehitriny ary ho avy amin'ny ambaratonga tsirairay. Ny tanjonao dia ny mamoha ny Priles "Tails" Miles. Ho fanampin'izany, tsy maintsy mandresy an'i Dr. Eggman ianao ary miady amin'ny famoronana mahatahotra indrindra azy, izay i Metal Sonic, kopian'ny Sonic manana fahaiza-manao mitovy, noho izany dia tena matanjaka izy ary, ambonin'izany rehetra izany, haingana.
Ny fahafinaretana dia azo antoka amin'ny alalàn'izao tontolo izao sy tantara an-taonina maro, ny tsirairay dia sarotra kokoa noho ny hafa ary miaraka amin'ny sary tsara izay hitondra anao taona maro lasa. Ity lalao ity dia manana fividianana anatiny sy lanja tokony ho 25 MB, ka maivana ihany. Ho setrin'izany dia efa manangona fampidinana mihoatra ny 10 tapitrisa ao amin'ny Play Store izy io.
Sonic The Hedgehog 2 Classical
Sonic The Hedgehog 2 Classic dia kinova fanavaozana ny lalao tany am-boalohany, saingy ao amin'ity lalao ity ihany koa dia manana ny sary Retro amin'ilay voalohany isika. Ary noho io lohateny io dia manana sehatra mahafinaritra izahay izay mila anampianao an'i Sonic handresy ireo sakana sy fahasahiranana rehetra amin'ny ambaratonga izay tokony hihazakazahany sy ho haingana hahatratra ny faran'ny tsirairay ary, noho izany, mahazo ary resy ny Dr. Eggman, izay te-hahita ny Chaos Emeralds fito hamita farany ny fiadiany farany, ny Eglin'ny Fahafatesana.
Amin'ity lalao ity dia azonao atao koa ny miantehitra amin'ireo namana roa akaiky indrindra sy akaiky indrindra an'i Sonic, izay Tails sy Knuckles, mpiara-dia aminy matanjaka indrindra. Ireo dia hanampy anao handroso amin'ny lalao hatramin'ny farany hahatratra ilay asa.
Misy faritra amina am-polony Badnik hiparitakaAvy amin'ny lava-bato ambanin'ny rano ka hatramin'ny filokana misy jiro vaovao misy sary mampihetsi-po. Azonao atao ihany koa ny mifaninana an-tserasera sy milalao amin'ny mode Time Attack sy ny mode fanafihan'ny lehibe. Ny zavatra iray hafa dia ny tsy maintsy hiadianao amin'ireo zavatra noforonin'i Dr. Eggman, toy ny Mecha Sonic mampatahotra, toetra manana fahaiza-manao mitovy amin'ny Sonic, saingy ratsy.
Ny iray amin'ireo tanjonao lehibe dia alaivo ny Emeralds Chaos rehetra hanova ny Super Sonic sy Super Knuckles ary amin'izany fomba izany no ho mpandresy. Aza avela hiala amin'izany ilay ratsy Dr. Eggman.
Tafika Sonic: Ady haingana
Mba hamaranana ity lahatsoratra fanangonana ny lalao Sonic tsara indrindra ho an'ny Android ity dia manana Sonic Forces isika: Speed ​​Battle iray amin'ireo lalao hetsika sy hazakazaka miaraka amin'ny sary tsara indrindra amin'ny Play Store iray manontolo. Ary io anaram-boninahitra io dia mila manana fifaninanana tena raha te ho tsara indrindra, satria afaka hilalao amin'ireo mpilalao erak'izao tontolo izao, izay efa maro ireo mahay ary tsy hamela ny tenany. mora mandresy.
Miezaha ho tsara indrindra ary safidio ny toetra tianao indrindra; tahaka ny anananao Sonic, azonao atao ny mahazo Sonic, Amy, Tails, Knuckles, Shadow, Rouge ary maro hafa. Amin'ny hazakazaka dia azonao atao ny manosika ny hafa hanohitra ny sakana sy ny badnik ary hanafika amin'ny toeram-pitrandrahana, varatra, afomanga, tadio ary maro hafa, mba hahazoana amboara hamaha làlana vaovao sy sarotra.
Azonao atao ihany koa ny mamoha endri-tsoratra vaovao sy hafahafa, toa ny Omega na Vector, hahazoana azy ireo ary hifaninana amin'ny Rings isaky ny hazakazaka hanatsarana azy ireo. Ny hafa noho tsy maintsy manatanteraka ny iraka ianao; misy maromaro azo resena.
Ary farany, Sonic Forces: Speed ​​Battle dia maherin'ny 50 tapitrisa no alaina ao amin'ny Play Store ary manana naoty 4.5 kintana. Milanja 40MB eo ho eo ihany koa, manamaivana azy.
Sonic Forces - Lalao mihazakazaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao Sonic 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Ny lalao pinball 6 tsara indrindra ho an'ny Android